EyeTrackShop: Fanarahana maso amin'ny alàlan'ny Web Cam | Martech Zone
EyeTrackShop: Fanarahana maso amin'ny alàlan'ny Web Cam
Talata, May 10, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fandrosoana lehibe eo amin'ny indostrian'ny fanarahan-maso ity. Taloha dia rehefa tadiavinao fa vita ny fanaraha-maso dia tsy maintsy nandoa vola be ianao tamin'ireny masoivoho ireny niaraka tamin'ny fitaovana sy ny mpiasa hanatanterahana ilay tetikasa.
Inona ny atao hoe maso?
Ny teknolojia fanaraha-maso ny maso dia mandrefy ny toerana misy ny mpanjifanao. Izany dia ahafahanao mahita avy hatrany raha mandeha na tsia ny fifandraisana misy anao. Taloha dia tsy maintsy miantehitra amin'ny vinavina nianatra ianao na fandalinana amin'ny laboratoara mandroso izay naharitra ela, saingy izao dia nataonay tamin'ny fomba vaovao, tsotra, haingana ary mahomby tokoa ny fanarahana maso. EyeTrackShop
Ny valin'ny EyeTrackShop dia aseho amin'ny tatitra namboarina, anisan'izany ny fotoana nandinihan'ny mpijery ilay zavatra, ny halavan'ny fotoana nijanonany tamin'ilay zavatra, sy ny heatmap iray manontolo izay nampifantohany ny sain'izy ireo. Ny fanaraha-maso ny maso dia teknolojia ilaina amin'ny fanatsarana ny pejy fitobiana sy dokam-barotra - miantoka ny fametrahana ny fifantohan'ny mpijery amin'ny toerana tena tianao. Tsy tratry ny fanandramana isan'andro anefa izany, noho ny fandaniana.
Misy tombony vitsivitsy amin'izany na ho an'ny masoivoho na ho an'ny mpanao dokam-barotra:
Ny teknolojia fanarahan-maso tsy manam-paharoa an'ny EyeTrackShop ho an'ny webcam dia mamela anao hanao fanadihadiana amin'ny tsena maro amin'ny fotoana iray.
EyeTrackShop dia afaka mizaha toetra amin'ireo takelaka lehibe tsy voafetra.
Ny fitsapana EyeTrackShop dia tanterahina ao an-trano, ny valiny dia mifanaraka amin'ny fampiasana voajanahary.
EyeTrackShop dia afaka mahazo valiny ao anatin'ny andro vitsivitsy.
EyeTrackShop dia lafo vidy - haavon'ny vidiny manampy anao hampitombo ny ROI, na dia amin'ny tetikasa kely aza.
Tags: appboyGeo-toeranainona ny isa klout
Pagelines: Hisintona ary hilatsaka Theming WordPress
May 11, 2011 ao amin'ny 7: 14 PM
Mamirapiratra. Eyetrackshop dia hanampy ny orinasa hitsapana fonosana, doka, pejin-tranonkala sns rehefa taloha dia tsy zakan'izy ireo koa. Fahombiazana lehibe amin'ny fikarohana eny an-tsena.